စင်ဘူရီပြည်နယ်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါးသယ်ဆောင်လာတဲ့ကားကို ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးပုံ
ထိုင်း ၊ မြန်မာနယ်စပ် ချင်းမိုင်ပြည်နယ် မဲ့အိုင်းဒေသမှာ မူးယစ်မှောင်ခိုသမားတွေနဲ့ ထိုင်းနယ်ခြားရဲတပ်ဖွဲ့တို့ . ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ရွှေတြိဂံဒေသထုတ် စိတ်ကြွဆေးအများအပြားကို ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်က၀င်လာတဲ့ စိတ်ကြွဆေး ၁၁သန်းကျော်ဖမ်းမိခဲ့တာပါ။ ဒီသတင်းကို ဗွီအိုအေ သတင်းထောက်မအေးအေးမာ ကပြောပြပေးမှာပါ။
ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ လာအို ဆုံရာ ရွှေတြိဂံဒေသကလာတဲ့ သန်းနဲ့ချီရှိတဲ့ စိတ်ကြွဆေးပြားတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံထဲကို ဆက်တိုက်ဝင်ရောက်လာနေပြီး ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ ကလည်း လိုက်လံပိတ်ဆို့ ဖမ်းဆီးခဲ့ရာမှာ စက်တင်ဘာလ ၁၆ရက် မနက်(၂)နာရီခန့်က မူးယစ်မှောင်ခိုသမားတွေနဲ့ ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲတို့ ပစ်ခတ်မူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်း၊ မြန်မာနယ်စပ် ချင်းမိုင် ပြည်နယ် မဲအိုင့်နယ်စပ်ကနေ ၀င်လာတဲ့ ကားငယ်နှစ်စီးနောက်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့စစ်ဆေးဖို့ လုပ်ရာကနေ မယ်အိုင့် အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာ နှစ်ဖက်အကြား ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မဲအိုင်း နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ က စက်တင်ဘာလ ၁၆ရက်နေ့က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အစစ်ဆေးမခံပဲ စတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ကားတစ်စီးကိုတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့ က ပြန်ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ ကားဟာလမ်းဘေးထိုးကျသွားပြီး ကားမောင်းသူဟာ သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ သေဆုံးခဲ့တာပါ ။ နောက်တဦးကိုတော့ အရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ ထိုင်းရဲတွေကဆိုပါတယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့ ကားပေါ်မှာသယ်ဆောင်လာတဲ့ WY 999 တံဆိပ် စိတ်ကြွဆေး ၅သန်းကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ် ။
အလားတူ စက်တင်ဘာလ ၁၃ရက်နေ့ ကလည်း စင်ဘူရီပြည်နယ်မှာ စိတ်ကြွဆေးပြား ၅သန်း လေးသိန်း တင်ဆောင်လာတဲ့ကားကို မူးယစ်နှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ က နောက်ကလိုက်ဖမ်းတုန်း ကားမောင်းပြေးခဲ့လို့မြို့လည်ခေါင်းမှာပဲ မူးယစ်မှောင်ခိုသမားတွေ မောင်းလာတဲ့ကားကို သေနတ်နဲ့ပစ်ပြီးဖမ်းခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ ထိုင်းရဲချုပ် Mr.Pakkapong Pongpetra ကတော့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ထိုင်းဘာသာနဲ့ အခုလိုပြောသွားပါတယ် ။
"အခုလို နိုင်ငံတွင်းမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးသန်းပေါင်းများစွာဖြန့်ချီနေတဲ့ နောက်ကွယ်က အဓိက မူယစ်ဂိုဏ်းတွေကို လိုက်လံဖမ်းဆီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးတွေ အမြောက်အမြား ဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ သတင်းပေးတဲ့ တာဝန်သိပြည်သူတွေကို ဆုငွေနဲ့ ဂုဏ်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို"့ပြောသွားပါတယ်။
ထိုင်းတောင်ပိုင်းမှာလည်း အခုရက်ပိုင်းအတွင်း မူးယစ်ဂိုဏ်းဝင်တွေနဲ့အတူ စိတ်ကြွဆေး တသန်းကျော် ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့ ကာလတန်ဖိုးဘတ်ငွေ သန်းပေါင်းနှစ်ထောင်ကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ကြွဆေး ၁၁သန်းကျော်ကို ဖမ်းမိခဲ့တာပါ ။
ရွှေကြိဂံဒေသက မူးယစ်မှောင်ဂိုဏ်းတွေဟာ မူးယစ်ဆေးတွေကို အရင်ကထက် ပိုထုတ်လုပ်နေပြီး ကိုဗစ်ကပ်ဘေးကာလမှာ ထိုင်းဘက်ကိုအလုံးအရင်း သယ်ဆောင်တင်သွင်းနေတယ်လို့ လည်း ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒေသဆိုင်ရာသတင်းတွေမှာ ဖေါ်ပြကြပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာရုံး (UNODC) ရဲ့ ဒီနှစ်ဆန်းမှာ ထုတ်ပြန်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု နှစ်စဉ် အစီရင်ခံစာမှာတော့ ဒေသတွင်းမှာ ဓာတုပစ္စည်းတွေကို အခြေခံထုတ်လုပ်တဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ တွင်ကျယ်လာတယ်လို့လည်း ရေးသားထားပါတယ်။
ထိုငျး၊ မွနျမာ နယျစပျမှာ စိတျကွှဆေး အမွောကျအမြား ဖမျးဆီးမိ
ထိုငျး ၊ မွနျမာနယျစပျ ခငျြးမိုငျပွညျနယျ မဲ့အိုငျးဒသေမှာ မူးယဈမှောငျခိုသမားတှနေဲ့ ထိုငျးနယျခွားရဲတပျဖှဲ့တို့ . ပဈခတျမှုဖွဈပှားခဲ့ပွီး ရှတွေိဂံဒသေထုတျ စိတျကွှဆေးအမြားအပွားကို ဖမျးမိခဲ့ပါတယျ။ ဒီရကျပိုငျးအတှငျးမှာတော့ ထိုငျးမွနျမာနယျစပျကဝငျလာတဲ့ စိတျကွှဆေး ၁၁သနျးကြျောဖမျးမိခဲ့တာပါ။ ဒီသတငျးကို ဗှီအိုအေ သတငျးထောကျမအေးအေးမာ ကပွောပွပေးမှာပါ။
ထိုငျး၊ မွနျမာ၊ လာအို ဆုံရာ ရှတွေိဂံဒသေကလာတဲ့ သနျးနဲ့ခြီရှိတဲ့ စိတျကွှဆေးပွားတှဟော ထိုငျးနိုငျငံထဲကို ဆကျတိုကျဝငျရောကျလာနပွေီး ထိုငျးရဲတပျဖှဲ့ကလညျး လိုကျလံပိတျဆို့ ဖမျးဆီးခဲ့ရာမှာ စကျတငျဘာလ ၁၆ရကျ မနကျ(၂)နာရီခနျ့က မူးယဈမှောငျခိုသမားတှနေဲ့ ထိုငျးရဲတပျဖှဲတို့ ပဈခတျမူဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ထိုငျး၊ မွနျမာနယျစပျ ခငျြးမိုငျ ပွညျနယျ မဲအိုငျ့နယျစပျကနေ ဝငျလာတဲ့ ကားငယျနှဈစီးနောကျကို ရဲတပျဖှဲ့ စဈဆေးဖို့လုပျရာကနေ မယျအိုငျ့ အဝေးပွေးလမျးမပျေါမှာ နှဈဖကျအကွား ပဈခတျမှုတှဖွေဈပှားခဲ့ကွောငျး မဲအိုငျး နယျခွားစောငျ့ရဲတပျဖှဲ က စကျတငျဘာလ ၁၆ရကျနကေ့ သတငျးထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။
ရဲတပျဖှဲ့ရဲ့ အစဈဆေးမခံပဲ စတငျပဈခတျခဲ့တဲ့ ကားတဈစီးကိုတော့ ရဲတပျဖှဲ့က ပွနျပဈခတျခဲ့လို့ ကားဟာလမျးဘေးထိုးကသြှားပွီး ကားမောငျးသူဟာ သနေတျဒဏျရာနဲ့သဆေုံးခဲ့တာပါ ။ နောကျတဦးကိုတော့ အရှငျဖမျးမိခဲ့တယျလို့ ထိုငျးရဲတှကေဆိုပါတယျ။
ဒီဖွဈစဉျမှာတော့ ကားပျေါမှာသယျဆောငျလာတဲ့ WY 999 တံဆိပျ စိတျကွှဆေး ၅သနျးကို ဖမျးဆီးခဲ့ပါတယျ ။
အလားတူ စကျတငျဘာလ ၁၃ရကျနကေ့လညျး စငျဘူရီပွညျနယျမှာ စိတျကွှဆေးပွား ၅သနျး လေးသိနျး တငျဆောငျလာတဲ့ကားကို မူးယဈနှိမျနငျးရေး ရဲတပျဖှဲ့က နောကျကလိုကျဖမျးတုနျး ကားမောငျးပွေးခဲ့လို့ မွို့လညျခေါငျးမှာပဲ မူးယဈမှောငျခိုသမားတှေ မောငျးလာတဲ့ကားကို သနေတျနဲ့ပဈပွီးဖမျးခဲ့ရတယျလို့ ဆိုပါတယျ ။ ထိုငျးရဲခြုပျ Mr.Pakkapong Pongpetra ကတော့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ထိုငျးဘာသာနဲ့ အခုလိုပွောသှားပါတယျ ။
"အခုလို နိုငျငံတှငျးမှာ မူးယဈဆေးဝါးသနျးပေါငျးမြားစှာဖွနျ့ခြီနတေဲ့ နောကျကှယျက အဓိက မူယဈဂိုဏျးတှကေို လိုကျလံဖမျးဆီးသှားမှာဖွဈပါတယျ။ မူးယဈဆေးတှေ အမွောကျအမွား ဖမျးဆီးနိုငျဖို့သတငျးပေးတဲ့ တာဝနျသိပွညျသူတှကေို ဆုငှနေဲ့ဂုဏျပွုသှားမှာဖွဈတယျလို"့ ပွောသှားပါတယျ။
ထိုငျးတောငျပိုငျးမှာလညျး အခုရကျပိုငျးအတှငျး မူးယဈဂိုဏျးဝငျတှနေဲ့အတူ စိတျကွှဆေး တသနျးကြျော ဖမျးဆီးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ အခုရကျပိုငျးအတှငျးမှာတော့ ကာလတနျဖိုးဘတျငှေ သနျးပေါငျးနှဈထောငျကြျော တနျဖိုးရှိတဲ့စိတျကွှဆေး ၁၁သနျးကြျောကို ဖမျးမိခဲ့တာပါ ။
ရှကွေိဂံဒသေက မူးယဈမှောငျဂိုဏျးတှဟော မူးယဈဆေးတှကေို အရငျကထကျ ပိုထုတျလုပျနပွေီး ကိုဗဈကပျဘေးကာလမှာ ထိုငျးဘကျကိုအလုံးအရငျး သယျဆောငျတငျသှငျးနတေယျလို့လညျး ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ဒသေဆိုငျရာသတငျးတှမှော ဖျေါပွကွပါတယျ။